Edere ya ndi nzuzu ka ha guo ndi nzuzu ... | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 21, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Maazị Rago, osote onye na -echekwa ihe editọ na akwụkwọ akụkọ bụ The Wall Street Journal, were kwuo okwu adreesị blogosphere dika:
The Blog Mob: Ndi ndi nzuzu dere ya ka ndi nzuzu guta ya.
Nke a nwere ike ịbụ mwakpo kachasị aghụghọ na enweghị isi nke m hụworo n'aka onye ọkaibe akwụkwọ akụkọ! Dị ka onye bụbu ọkachamara n’akwụkwọ akụkọ, ọ na-akụda mmụọ n’ezie ịhụ àgwà a. Ọbụna nke ka njọ, abụ m onye na-akwado Wall Street Journal. Kama ịnakwere "ozi superhighway" akwụkwọ akụkọ na-eche na ọ kwesịrị ịnọgide na-enwe dị ka "ozi n'okporo ụzọ"… na "otu ụzọ" ụzọ na.
Maazị Rago, ọ dị m nwute na ị naghị enwe ike ịchịkwa nkọwa, nzacha na idezi ozi tupu anyị ‘ekwe’ ka anyị gbarie. Ọ dị nwute na enweghị m olu okwu na nkaasụsụ nke onye ogo gị. Ikekwe echiche gị nwere ihe jikọrọ ya na echiche ndị ọzọ gị ngwaahịa a:
Ma ọ bụ nke a… Technorati na ntụnyere:
Maazị Rago, ị nwere ike chọọ ilekwasị anya na onye nzuzu a… ọ na-adọta ọtụtụ mmadụ na-adịghị mma (n'akụkụ aka nri ala):
M na-atụ anya atụnyere anyị na-agụ akwụkwọ na-esote afọ… ma ọ bụrụ na ị na-gburugburu. Enwere m obi abụọ na ị ga-adị.
Dee 27, 2006 na 3: 23 AM
Onwere ihe na-eche mgbe o bula o maara ihe niile. N'ụzọ doro anya, ọ nweghị ezi uche ọ bụla ide ihe dị mma na nke mbụ… hey ebe a bụ echiche… ma eleghị anya ọ na-echegbu onwe ya na ụfọdụ blogger ka mma (Doug) ga-abịa ma were ya ọrụ ya. 8)